Wararka - Sidee dhererka focal u saameynayaa natiijooyinka qaabeynta 3D
Sidee dhererka focal u saameynayaa natiijooyinka qaabeynta 3D
Sawir qaadaha, waxaa jira afar muuqaal oo aad u adag in la dhiso moodooyinka 3D:
Dusha sare ee milicsiga ah oo aan ka tarjumi karin macluumaadka dhabta ah ee shayga. Tusaale ahaan, dusha biyaha, muraayadda, aag ballaaran oo ah dhismayaasha dusha sare leh
Waxyaabaha qunyar socodka ah. Tusaale ahaan, gawaarida isgoysyada
Muuqaallada meesha astaamaha-dhibcaha aan la jaan qaadi karin ama iswaafajinta astaamaha-ay leeyihiin khaladaad waaweyn, sida geedaha iyo duurka.
Dhismayaal adag oo banaan. Sida ilaalada, saldhigyada saldhigga, munaaradaha, fiilooyinka, iwm.
Nooca 1 iyo 2 muuqaal, iyadoon loo eegin sida loo hagaajiyo tayada xogta asalka ah, qaabka 3D wax horumar ah ma sameyn doono.
Nooca 3 iyo nooca 4 muuqaal, hawlgalada dhabta ah, waxaad ku hagaajin kartaa tayada qaabka 3D adoo hagaajinaya xallinta, laakiin wali aad ayey u fududahay in la helo bannaan iyo godad qaabka ah, waxtarka shaqadiisuna aad ayey u yaraan doontaa.
Marka lagu daro muuqaalada gaarka ah ee kor ku xusan, nidaamka qaabeynta 3D, waxa aan fiiro gaar ah u leenahay waa tayada moodada 3D ee dhismayaasha. Sababtoo ah dhibaatooyinka la xiriira dejinta xuduudaha duulimaadka, xaaladaha iftiinka, qalabka helitaanka xogta, 3D tusaalaha software, iwm. .
Dabcan, dhibaatooyinka kor ku xusan waxaa sidoo kale lagu hagaajin karaa 3D model-modify. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad qabato shaqada wax ka beddelka moodel ballaaran, qiimaha lacagta iyo waqtiga ayaa aad u weynaan doona.
Qaabka 3D kahor intaan wax laga beddelin
Qaabka 3D kadib markii wax laga beddelay
Maaddaama ay tahay soo saaraha R & D ee kaamirooyinka halista ah, Rainpoo wuxuu ka fekeraa aragtida ururinta xogta:
Sidee loo qaabeeyaa kamarad laba gees leh si guul leh loogu hagaajiyo tayada qaabka 3D iyada oo aan la kordhin isku-darka wadada duulimaadka ama tirada sawirrada?
2 Waa maxay dhererka focal
Dhererka focus-ka foornadu waa halbeeg aad u muhiim ah.Wuxuu go'aamiyaa cabirka maaddada ku jirta qalabka sawir qaadista, taas oo u dhiganta miisaanka shayga iyo sawirka. Markaad isticmaaleyso kamarad dijitaal ah wali (DSC), dareemayaasha badanaa waa CCD iyo CMOS. Marka DSC loo adeegsado anteenada-sahaminta, dhererka diiradda ayaa go'aaminaya masaafada sanbal qaadista dhulka (GSD).
Markaad isla shayga isla bartilmaameedka ah isla masaafo isku mid ah, isticmaasho muraayadaha dhererkoodu dhererkoodu dhererkiisu sarreeyo, sawirka shaygan ayaa weyn, oo muraayada oo dhererkeedu gaaban yahay ayaa yar.
Dhererka diiradda ayaa go'aaminaya cabirka shayga sawirka ku yaal, xagalka daawashada, qoto dheerka aagga iyo aragtida sawirka. Waxay kuxirantahay arjiga, dhererka focal wuxuu noqon karaa mid aad u kaladuwan, oo udhaxeeya xoogaa mm ilaa dhowr mitir. Guud ahaan, sawir-qaadista hawada, waxaan doorannaa, waxaan doorannaa dhererka dhererka u dhexeeya 20mm ~ 100mm.
3 、 Waa maxay FOV
Muraayadda muraayadaha indhaha, xagasha ay sameyso barta bartamaha lenska sida ugu sareysa iyo inta ugu badan ee sawirka sheyga ee ka gudbi kara muraayada indhaha waxaa loo yaqaan xagasha aragtida. Markuu FOV sii weynaado, weynaanta aragga ayaa yar. Marka la eego, haddii sheyga bartilmaameedka uusan ku jirin FOV nalka ka muuqda ama ka baxa sheyga ma galayo muraayada isla markaana sawirka lama sameyn doono.
4, dhererka dhererka & FOV
Loogu talagalay dhererka dhererka kamaradda qasabka ah, waxaa jira laba isfaham la'aan guud:
1) Markay dhererkoodu dhererkoodu dhererkoodu sarreeyo, ayay sare u kacdaa dhererka duulimaadyada ee drones, oo waynaataa aagga uu sawirku dabooli karo;
2) Muddada dhererkeedu sarreeyo, ayaa sii ballaaranaya aagga caymiska isla markaana sare u qaadaya waxtarka shaqada;
Sababta labada isfaham la’aan ee kor ku xusan waa xiriirka ka dhexeeya dhererka focal iyo FOV lama aqoonsan yahay. Xiriirka ka dhexeeya labadooda ayaa ah: dhererka dhererka dhererku, waa yar yahay FOV; dhererka dhererku wuu ka gaaban yahay, ka weynaanayaa FOV.
Sidaa darteed, marka cabirka muuqaalka jirku, xallinta xaddiga, iyo xallinta xogta ay isku mid yihiin, isbeddelka dhererka diiradda ayaa kaliya beddelaya dhererka duulimaadka, aagga uu sawirku ka kooban yahayna isma beddelo.
5, Dhererka dhererka & Waxtarka Shaqeynta
Ka dib markaad fahamto xiriirka ka dhexeeya dhererka focal iyo FOV, waxaad u maleyn kartaa in dhererka dhererka dhererku uusan wax saameyn ah ku yeelanaynin duulimaadka. Farshaxan-sawir-qaade, waa mid sax ah (si adag u hadlaya, dhererka dhererka dhererkiisu, ayaa sarreeya dhererka duulimaadka, tamarta badan ee ay isticmaasho, waqtiga duulimaadka oo gaagaaban iyo hoos udhaca howlaha shaqo).
Sawir qaade ah, oo dhererkiisu dhererkiisu hooseeyo, ayaa hoos u dhigaya waxtarka shaqada.
Muraayada muraayadda ah ee kamaradda guud ahaan waxaa la dhigaa xagal dhan 45 °, si loo hubiyo in la soo uruuriyo xogta muuqaalka ee wajiga hore ee aagga bartilmaameedka, wadada duulimaadka ayaa loo baahan yahay in la ballaariyo.
Sababtoo ah muraayadaha indhaha waxaa laga gooyaa 45 °, isosceles triangle right ayaa la sameyn doonaa. Iyadoo loo maleynayo in aragtida duulimaadka diyaaradaha aan la tixgelin, xuddunta ugu weyn ee muraayada indhaha ayaa loo qaaday dhinaca cabiraadda aagagga cabbirka iyada oo loo baahan yahay qorshe qorshayn waddo, ka dibna marinka diyaaraddu wuxuu ballaarinayaa masaafada EQUAL illaa dhererka duulimaadka .
Markaa haddii aagga caymiska dariiqa aanu isbeddelin, aagga shaqada ee dhabta ah ee muraayadaha dhererka dhererka gaaban wuu ka weyn yahay kan muraayada dheer.
Hore:Sidee dhibcaha xakamaynta iyo xogta PPK u saamaynayaan saxsanaanta qaraabada qaabka 3D
XigaSidee GSD iyo noocyada diyaaradaha aan duuliyaha wadin u saameeyaan saxsanaanta qaraabada qaabka 3D